अमृत र उनकि श्रीमतिको पहिलो दोहोरी गीतकाे सुटिङमा यस्तोसम्म! – (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > अमृत र उनकि श्रीमतिको पहिलो दोहोरी गीतकाे सुटिङमा यस्तोसम्म! – (भिडियो सहित)
अमृत र उनकि श्रीमतिको पहिलो दोहोरी गीतकाे सुटिङमा यस्तोसम्म! – (भिडियो सहित)
admin February 1, 2020 भिडियो, मनोरञ्जन	0
पछिल्लो केहि समय यता लोक गायक अमृत सापकोटाको निकै चर्चा छ । कारण उनि र उनको श्रीमतीको प्रतक्ष्य दोहोरी हो । उनीहरु बिचको पहिलो गीतको भिडियो सुटिङ्ग सम्पन्न भएको छ।गीतमा अमृत र सुनिताको आवाज देखिन्छ भने भिडियोमा पनि चर्चित टिकटक देखि चर्चित मोडल सम्म देखिन्छन। अमृत सापकोटा यो समय स्टेजमा धेरै ब्यस्त रहेका कलाकार हुन् भने उनकी श्रीमतीको पनि आवाज उस्तै सुमधुर छ। कमला घिमिरेसंग दोहोरी गाएर एकाएक चर्चामा आए ।
यसरी चर्चामा आएका अमृत सापकोटा सामाजिक संजालमा सबैतिर भाइरल भए जसको कारण उनको खोजि ब्यापक हुने गर्दछ साहेद यसै कारण हुन सक्छ अहिले अमृतको माग छ। उनि संगै उनको श्रीमतीसंग सुटिङ स्पटमै गरिएको यो बिशेष कुराकानी हेरौ जस्ताको तस्तै हेरेर यहाँहरूलाइ कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला ।
अन्जना हत्याराको अन्तिम पोष्टमाटम बाहिरियो, किन बोल्न चाहिनन् उज्वलकि श्रीमति मिडियामा? – भिडियोमै हेर्नुस्